ခြောက်လ Sigma အမှီ
ဦးနှောက် Sensei ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Amit Patel က
ဦးနှောက် Sensei စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Professional ကစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်ထူးခြားတဲ့လမ်းကမ်းလှမ်း. ၎င်း၏မစ်ရှင်သင်သည်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်သင်တို့၏သင်ယူမှုရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးဖို့ရိုးရှင်းပြီးဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများကိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
ဦးနှောက် Sensei သော့ချက်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတရားများကိုအားဖြည့်ရန်ကာတွန်းဇာတ်လမ်း အသုံးပြု. အခြားစမ်းသပ်မှု prep သင်တန်းများထံမှထွက်ရပ်. ပုံပြင်ကပိုမိုလွယ်ကူလူတွေသတင်းအချက်အလက်ကိုစုပ်ယူရန်အဘို့အအောင်သက်သေပြခဲ့ကြ. ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ, ဦးနှောက် Sensei က၎င်း၏ဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်အကြောင်းအရာအပြင်သင်ယူဖို့တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး, quizzes, andaton of practice questions.
AsaRegistered Education Provider (REP) with the Project Management Institute (အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ), you will meet the 35 hour requirements for the PMP exam. This course isagreat way to maximize your study time without having you pay extra foracourse that will let you gain contact hours. And, you’ll be having fun while putting in the hours!
ဦးနှောက် Sensei ရဲ့ပြီးပြည့်စုံ PMP သင်တန်းထက် ပို. တပ်ဆင်ထားကောင်းပါသည် 900 အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေနဲ့အဖြေကိုရှင်းလင်းချက်. အဆိုပါ PMP စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူလူတိုင်းနီးပါးကြောင်းအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုလေ့လာနေ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ရမှတ်ဖြတ်သန်းသောသင်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းသဘောတူပါလိမ့်မယ်.
စာအုပ်အနေဖြင့်ဖတ်ပါဒါဟာပျင်းစရာပါမောက္ခနားထောင်ရန်အလွန်ပျော်စရာမဟုတ်ဘူး. များစွာသောအခြား PMP စမ်းသပ်မှု prep နည်းပြသင်တန်းများဤပြဿနာရှိဦးဆောင်. သို့သော်ဦးနှောက် Sensei နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာတွန်း sensei ရ! He will be your teacher throughout your studies and offer you any additional help or questions you may run into.
This top-rated review course will give you everything you need to know to pass the PMP exam, includinga100% pass guarantee to ensure that Brain Sensei’s software works. This course is anything but traditional, တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းနှင့်တစ်သမတ်တည်းအဆိုပါ PMI ဖွငျ့မဆိုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ up to date ဖြစ်နေကြောင်းအရည်အသွေးမြင့်အပြန်အလှန်အကြောင်းအရာအားဖြင့်သင်တို့ဆုံးမဩဝါဒပေး. ဦးနှောက် Sensei ရဲ့အခမဲ့သရုပ်ပြထွက်စစ်ဆေးနှင့်ကိုယ်အဘို့သင်ယူခြင်းဟာဇာတ်လမ်းပြောပြကြည့်ရှု!
1. ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့အတူ interactive သင်ခန်းစာများ
မှရေးသား: Amit Patel က
5 /5ကြယ်များ
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် PMP စာမေးပွဲများကို
မူပိုင်ခွင့်© 2018 CrushThePMExam.com. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
ဝန်ကြီးချုပ် PrepCast ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း